Qeybta Daaweynta Ilaha Hawada, Xakameynta, Qeybaha Fulinta - Blch Pneumatic
U taxane ah FR.L isku darka
Ka saar biyaha iyo walxaha si wax ku ool ah. 40µm iyo 5µm walxaha shaandhada si fudud ayaa la isugu beddeli karaa oo la beddeli karaa. Dejinta cadaadis sax ah oo fudud. Saliida saliida ayaa dib loo buuxin karaa iyadoon la joojineynin hawo bixinta. Ku buufinta saliida ceeryaantu waxay hubisaa in saliidaha la mariyo mashiinada. Bakeeriga lidka ku ah aashitada iyo alxanka iyo weelka aluminiumku wuxuu ku siiyaa difaac aad u fiican xagga bay'ada shaqada kiimikada. Saliida saliida leh (Lagu taliyay): ISO-VG32
Taxanaha F iskudarka FR.L
Cadaadiska ugu badan ee shaqeynaya: 16bar, cadaadiska ugu sarreeya: 12 bar Waxay ku buuxin kartaa saliidda saliidda sida nidaamka otomaatiga ah u sii wado shaqada. Waxqabadka hagaajinta cadaadiska ayaa lagu kalsoonaan karaa saxnaan sare. Waxtarka baabi'inta qoyaanka iyo hadhuudhka adag ayaa sarreeya.
AFC-BFC taxane FR.L
AC-BC taxanaha FRL
AFR-BFR taxanaha Sifeeyaha Hawada
Taxane C saliidaynta hawada
AR / BR taxanaha Jaangooyaha Hawada
Taxanaha HSV slide Madax
ASC Nidaamka Xakamaynta Qulqulka Taxanaha
RE Taxanaha Xakamaynta Qulqulka
3H-4H taxane Hand kabaal Madax
Taxanaha FV320-420 Foot Valves
CXSM20-50 Silsilad Labaad ah
SC50-150 Silsilad Caan ah
P80 页 CU taxanaha Bilaashka Mount Mount
Qalabka hal taabashada birta
Fiidiyowgu ma muuqdo, waxay u badan tahay in biraawsarkaagu uusan taageerin fiidiyowga HTML5
# QORAALKA #
BLCH Pneumatic Science and Technology Co. Ltd waxaa la aasaasay bishii Ogos 2004, waxay ku taalaa aaga warshadaha horumarinta dhaqaalaha ee YUEQING. Shirkaddu waxay ka kooban tahay aag 24000 ㎡ ah, oo leh 5 saldhig oo wax soo saar leh in ka badan 300 oo shaqaale ah. Waa shirkad aan gobol ahayn oo ku takhasustay R&D, wax soo saarka, iibka iyo dayactirka adeegga qaybaha pneumatic ..
HAMBALYO! Hagaha "Pilot Gudaha" ee Saxitaanka Yaraynta Cadaadiska Cadaadiska "Heerka kaas oo ay hogaamineysay diyaarinta shirkadeena waxaa ogolaaday Ururka Tayada Wax soo saarka Zhejiang sida R ...
BLCH Pneumatic Science and Technology Co. Ltd waxaa la aasaasay bishii Ogos 2004, waxay ku taalaa aaga warshadaha horumarinta dhaqaalaha ee YUEQING. Shirkaddu waxay ka kooban tahay aag 24000 ah